Xeerarka EGO Waxay Sameeyeen Shuruucda Wadooyinka Baska ee Xirfadlayaasha Caafimaadka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraJidadka EGO ee loo Yaqanay Xirfadlayaasha Xanaanada Caafimaadka
19 / 04 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, ego, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Qabanqaabinta dariiqyada basaska loogu talagalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee Ankara
Agaasinka Guud ee Magaalada Ankara EGO General Directorate wuxuu u diyaar garoobay jidadka baska si looga hor tago shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee la halgamaya cudurka Coronavirus. In kasta oo Agaasinka Guud ee EGO uu dhigay adeeg gaar ah iyo joogsiyo dheeri ah khadadka qaarkood ee ay codsadeen shaqaalaha daryeelka caafimaadku, wuxuu gaabiyey socodsiinta howlaha gaadiidka Isbitaalka Magaalada iyadoo la yareynayo tirada wareejinta.
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay diyaarinaysay jidadka basaska si ay shaqaalaha daryeelka caafimaadku si fudud oo aan kala go 'lahayn ugu tagi karaan goobahooda shaqo.
Agaasinka Guud ee EGO, oo ku daray joogsiyo dheeri ah khadadka qaarkood, ayaa bilaabay adeeg cusub oo u fududayn doona gaadiidka xirfadleyda daryeelka caafimaadka ee Isbitaalka Magaalada iyadoo la raacayo baahiyaha ay si toos ah u sameeyaan iyo khadka Başkent 153.
Maareeyaha Guud ee EGO Nihat Alkaş wuxuu sheegay inay u diyaar garoobeen khadadka basaska si ay u soo qaadaan shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya xawaare aad u adag dagaalka ka dhanka ah cudurka faafa ee coronavirus-ka waqti yar wuxuuna sheegay inay yareeyeen tirada wareejinta ee la sameeyay 3 gaari si ay u gaaraan Isbitaalka Magaalada.
Isagoo sheegay inay soo gaabiyeen geedi socodkii ay ku gaari lahaayeen cisbitaalka ay ka shaqeeyaan, iyagoo qorshe gaar ah u samaynaya xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka, Alkaş ayaa yidhi:
“Waxaan sii wadeynaa inaan la shaqeyno xirfadleyda daryeelka caafimaadka marka loo eego amarka Duqa Magaalada, Mudane Mansur Yavas. Waxaan isku dayeynaa inaan ka soo baxno shuruudaha xirfadleydayada daryeelka caafimaadka khadka khadka Başkent 153. Thanks to qorshayaasha cusub ee aan hirgalinay, waxaan meesha ka saari doonnaa dhibaatada gaadiidka ee xirfadyahanada daryeelka caafimaad. Waxaan diyaar u nahay inaan intii karaankeena ah wax u qaban karno xirfadyahanada daryeelka caafimaadkeena. ”
LAMBARKA LAMBARKA 112-450 LA SOO SAARAY
Agaasinka guud ee EGO, oo qabanqaabiyaya qadka 112 ee Kızılay-Ulus-Emniyet Sarayı - Gazi Hospital-AŞTİ iyo Şehir Hospital, ayaa ka faa'iideysan kara adeegyada caafimaadka ee jooga hoteelka iyo guriga martida ee ku yaal agagaarka Armada AVM, baska 112 ee Isbitaalka Magaalada oo aan joogsan meelwalba. Wuxuu intaas ku daray joogsiyada gobolkaan qadka 112.
Agaasime guud oo ka tirsan EGO, oo talaabo ka qaaday baahiyaha ba'an ee ka jira Karapürçek, Hüseyingazi, Solfasol, Güneşevler, Siteler iyo Ornek Mahallesi, ayaa dariiqyo cusub ku daray 450 lambar baska EGO ah.
Turkey hore ee Grand National Assembly, taas oo sii wadi doonaa in Hospital City Solfasol dhex line 450, Gulpinar, Güneşevler, Sites, Ulubey, muwaadiniinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee ku nool Hogaamiyaha iyo xaafadda Wakiilka in ay gaaraan Raaxaysay ku Hospital City.
WAQTIGII LAGU SAMEEYAY
Waxaa mahad leh qorshe kale, rakaabkii ka yimid Eryaman, Fatih, Sincan, Yenikent iyo Etimesgut waxay adeegsan jireen giraanta Isbitaalka Magaalada oo laga keenay Koru iyo Ümitköy Metro Stations, iyagoo gaarey Isbitaalka Magaalada iyagoo bedelaya seddex gaari.
Thanks to qorshaha cusub, wareejinta waxaa sameyn doona laba gaari halkii sedex, iyo marin toos ah oo loo helo Isbitaalka Magaalada ayaa laga bixin doonaa Koru iyo Metromitköy Metro Stations.
ADEEGYADA GAARKA AH EE CAAFIMAADKA CAAFIMAADKA
Ilaa habka loo dagaallamayo dillaaca coronavirus, adeeg gaar ah ayaa loo bilaabay xirfadleyda daryeelka caafimaadka ee ku aaddan Jidka Xarunta Dakhliga Maamulka Dakhliga OECD Xarunta Guest House iyo Isbitaalka Tababarka iyo Cilmi-baarista ee Yenimahalle.
Adeegga, oo loo adeegsaday in lagu xalliyo dhibaatada gaadiid ee xirfadleyda daryeelka caafimaad ee jooga Xarunta Tababbarka ee Xarunta OECD ee Xarunta Dakhliga, ayaa socon doonta inta u dhexeysa 07.30 iyo 19.30. Adeegga gaarka loo leeyahay wuxuu ka bixi doonaa Yenimahalle Training and Research Hospital inta u dhaxeysa 08.15 iyo 20.15.
Adeeg kale oo ah nooca xamuulka qaada ayaa ka dhaqaaqi doona GATA una sii gudbi doona shaqaalaha daryeelka caafimaadka 07.45 subaxnimo isla markaana waxay gaadiid ku siin doontaa Hoyga Hablaha Emine Şerife ee ku yaal Xerada Hacettepe Beytepe Campus. Isla adeeggan ayaa ka dhaqaaqi doona Hoyga Gabdhaha ee Emine Şerife una gudbaya GATA markay tahay 20.00.
Shaqaalaha caafimaadku waxay awoodi doonaan inay ku fuulaan basaska xamuulka ah ee loo qoondeeyay Agaasinka Guud ee EGO, oo bilaash ah, iyagoo muujinaya aqoonsigooda shirkadeed.
Imaansho cusub oo loogu talagalay Gaadiidka Gaadiidka ee Manisa
Line 250, oo ah mid ka mid ah hoosaadka Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark, oo muwaadiniinta si toos ah ugu keenaya Maddaarka Sabiha Gökçen, ayaa la kulmaya rakaabkeeda 1da Juun. Khadadka 1 ayaa duulimaadyadooda bilaabi doona 250da Juun [More ...]